सडक व्यापारले समृद्ध - Pradesh Today सडक व्यापारले समृद्ध - Pradesh Today
सडक व्यापारले समृद्ध
जेठ ११, २०७६ जीतसागर जी.एम.
तुलसीपुर, ११ जेठ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ की इन्द्रकली नेपाली उमेरले पाँच दशक बढी भईसकेकी छन् । तीन सन्तानका आमा इन्द्रकली आजभन्दा करिब ३० वर्षअघि विस २०४५ सालमा जब उनी विवाह बन्धनमा बाँधिइन्,
त्यसबेला देखि नै उनी र उनका श्रीमान्ले सडकमा व्यापार गर्न शुरु गरे । नेपाली दम्पत्तिले साँझ बिहानको छाक कसरी टार्ने भन्ने पिर थियो ?
त्यो समयमा उनीहरुसँग सम्पत्तिको नाममा केही पनि थिएन् । व्यापार, व्यवसायबाट मात्र आर्थिक पक्ष बलियो हुन्छ भन्दै त्यो समयमा गाउँकै एक वृद्धआमाले उनी र उनका श्रीमान्लाई सडकमा व्यापार गर्न प्रोत्साहन गरिन् ।
त्यतिबेलादेखि उनीहरु सडक व्यापार गर्न शुरु गरे । सडकमा मौसमी फलफुलको व्यापारसँगै डोको नाम्लो लगायतका सामग्री बिक्री गर्दै व्यापार शुरुवात गरेका थिए ।
दिनहरु बित्दै गए, नेपाली दम्पत्ति ठूलो मेहनत र चुनौतिको सामना पनि गरे । ‘कुनै दिन भोक–भोकै पनि हिड्नुपथ्र्यो, तर हरेश नखाई निरन्तर काम गरिरहँदा आज अलिकति भएपनि सम्पत्ति जोड्न सफल भएका छौँ’ एकहात काफल ग्राहकलाई दिँदै इन्द्रकलीले बताईन् ।
सडक व्यापारको लामो अनुभवमा नेपाली दम्पत्तिले सम्पति पनि कमाईसकेको छ तर पनि सडक व्यापारको मोहले अझै छोडेको छैन् । इन्द्रकलीका श्रीमान् विपी चोक नजिकैको सटरमा भाडामा व्यापार गर्छन्
तर इन्दकली भने विपी चोकको नजिकै आसपासमा सडक व्यापार गरिरहेकी छन् । विभिन्न समयमा मौसमीफलको व्यापार गर्दै आएकी इन्द्रकली यतिबेला काफलको बिक्रीमै व्यस्त छिन् । दिगोरुपमा कुनै पनि काम गर्न सकियो भने सफलताको विन्दुमा पुग्न सकिन्छ भन्ने नेपालीको भोगाई र अनुभवबाट सिक्न सकिन्छ ।
काफलसँगै मौसमी फलफुलको व्यापारबाटै उनले छोरीलाई स्टाप नर्स बनाउन सफल भएकी छन् भने दुई छोराले उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् । ‘छोराहरुको विहे भयो, छोरी अहिले अष्ट्रेलियामा बस्छे’ मैले यि यस्तै विभिन्न समयमा फल्ने मौसमी फलको व्यापारले छोरीलाई स्टाप नर्स पढाएको हुँ ।
‘सडकको टन्टलापुर घाम आयो, वर्षाको झरीमा पनि मैले आफ्नो कामलाई छोडेन्, समस्या त कति आयो, कति ? भनि साध्य नै छैन् बाबु’ नेपालीले भनिन् ।
उनले तुलसीपुरमा सडक व्यापार शुरु गर्दा तुलसीपुरमा बस्ती पनि निकै कम थियो तर पनि व्यापार राम्रो हुने गरेको थियो । त्यो समयमा भन्दा अहिले बढी कारोबार हुने गरे पनि अहिले पहिलेको जस्तो फाइदा नभएको उनको भनाइ छ ।
‘व्यापारमा दुई÷चार पैसा आउला भनेर केही गर्ने हो, तर भनेजस्तो छैन्, अहिले नगरपालिकाकालाई पनि कर बुझाउनुपर्छ तर त्यो अनुसारको व्यापार भने छैन्, अब म त पहिल्यैबाट गरी आएको पेशा भएका कारण पनि छोडेको छैन्, नयाँ आउनेहरुका लागि खासै फाइदा छैन्’ उनले भनिन् ।
करिब ३० वर्षअघि नेपालीले व्यापार शुरुवात गर्दा २÷३ रुपैयाँ मानो काफल थियो तर अहिले काफल मानो एक सय रुपैयाँ पुगेको छ, विगतलाई सम्झिदै इन्द्रकली भन्छिन् ‘कहाँ त्यो बेलाको जमाना,
कहाँ अहिलेको जमाना ? त्यो बेलामा थोरै बिक्री भए पनि नाफा हुन्थ्यो, त्यस समयमा ९० को खरिदमा एक सय रुपैयाँमा बिक्री गरे पनि फाइदै हुन्थ्यो तर अब त व्यापार सोचेजस्तो छैन् ।
भनिन्छ ‘जहाँ ईच्छा त्यहाँ उपाय’ यो उखान नयाँ नौलो होइन्, तर नेपाली दम्पत्तिका लागि यही उखान नै उर्जाशील छ । सडकको छेउछाउ होस् या गल्लीमा उनीहरु व्यापार बिक्रीका लागि सामान फिजाएर बस्न थालेको लामो समय भयो तर पनि मौसमी फल तथा डोको नाम्लोको व्यापारले निरन्तरता पाईराखेको छ ।
शुक्रबार दिउँसो सडकमै काफल व्यस्तमै रहेकी नेपालीले भनिन्—‘चोर्न पो लाज, काम गर्न के को लाज, छोरा र छोरी आफ्नै खुट्टामा उभिने भईसके, उनीहरुले आमा वुवा अब सडकको व्यापार नगर्नुस भन्छन् तर मनले मान्दैन,
अझै हातपाखुरा चलुन्जेलसम्म यो व्यवसाय छोड्दिन ।’ काफलसँगै मौसमी फलफुलको व्यापारबाटै उनले छोरीलाई स्टाप नर्स बनाउन सफल भएकी छन् भने दुई छोराले उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् ।
‘छोराहरुको विहे भयो, छोरी अहिले अष्ट्रेलियामा बस्छे’ मैले यि यस्तै विभिन्न समयमा फल्ने मौसमी फलको व्यापारले छोरीलाई स्टाप नर्स पढाएको हुँ, छोरीले पनि निकै मेहनत गरिन् ।
आर्थिक उपार्जनका लागि बजारका विभिन्न स्थानमा अहिले मौसमी फल काफल बिक्री गर्नेहरुको भिड देख्न सकिन्छ । चर्को घाममा बजारका चोक तथा गल्लीमा काफल बिक्री गर्ने मध्ये कतिपय भर्खरै शुरुवात गरेको बताउने गरेका छन् भने कतिपय भने लामो समयदेखि नै विभिन्न मौसमी फलसँगै काफल बेच्दै दैनिकी चलाएका छन् ।
सफलतामा पुग्न चुनौतिको सामना गर्दै दृढ इच्छाशक्तिका काम गर्नुपर्छ अनि दीगो हुनुपर्छ भन्ने उदाहरण इन्द्रकलीको भोगाईबाट सिक्न सकिन्छ । काफल बिक्रीबाटै आर्थिक पाटोलाई बलियो बनाउनेहरुमध्येकी एक इन्द्रकली अहिले पनि काफल बिक्री मै व्यस्त देख्दा धेरै अचम्मित पनि हुन्छन्, धेरै आत्मविश्वास लिदै पनि जाने गरेका छन् ।
काम र सिकाइ सँगसँगै